सहारा बिहिन बृद्धको संघर्ष जाडोसंग — Digital News
डिजिटल संचार संवाददाता प्रकाशित : २०७७/१०/२ गते
भेरी नगरपालिका–५ छिप्रेनाका एक सय बर्षिय बृद्ध सहारा बिहिन भएका छन् । सहारा बिहिन सय बर्षिय बृद्धले पुस–माघ महिनाको कठ्याङग्रीदो जाडोसंग संघर्ष गरिरहेका छन् । जाडोले चिउरी खट्खटाई रहेका बृद्धको अबस्थालाई देखेपछि सामाजिक चेतना बाकेका नागरिकहरुका आँखा रसाउने गर्दछन । जीवनको अनन्तकाल तथा उत्तरार्धमा आएर सहारा बिहिन हुनु, खाने गाँस र व्यवस्थित बासको व्यवस्था नभएर जाडोमा थरथरि जीऊ कमाउनु पर्ने अबस्थाले धेरैको ध्यानाकर्षण गर्ने गरेको छ ।
दैनिक बृद्धीदरमा रहेको मानव समुदाय भित्रकै एक सय बर्षिय बृद्ध कसरी सहारा बिहिन भएका होलान ? भनेर सोच्न पनि नसकिने, सुन्दा पनि अपत्यारिलो लाग्ने बिषयका मुख्य पात्र हुन भेरी नगरपालिका–५ छिप्रेनाका बिजु पुन । सय बर्ष पुगि सकेको बताउने बिजु पुनले अहिले पनि प्रष्टै रुपमा आँखाले देख्न सक्छन्, कानले सुन्न सक्छन् । तर, उनलाई पेट दुख्ने, खाना मन नलाग्ने, पिसाब पोल्ने, पिसाब थोरै आउने तर, पटक–पटक आउने समस्याले भने सताई रहेको छ । गाउँको बिचैमा रहेको घरमा बस्ने एक्लो सदस्य हुन बिजु पुन् । कोठा भित्र र बाहिर गराउने उनलाई सहारा दिने घरमा कोही पनि छैन् । सहारा बिहिन बनेका बिजु घिस्रिदै गएर घरको भुईतलाको कोठामा सुत्ने गर्दछन् । राम्रोसंग सुत्नलाई उनीसंग कुनै लत्ताकपडा छैन् । जीउमा लगाउने बाक्लो कपडा पनि नभएका बिजु परालको बिस्तरामा पुरानो च्यातिएको कम्मल ओडेर सुत्ने गरेका छन् । कोठाबाट घिस्रिदै आगनमा आएर दिसा पिसाब गर्ने गरेको उनले बताउने गरेका छन् ।
आफ्नो नाममा आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता (जेष्ठ नागरीक भत्ता) कसले बुझ्छ ? र कसले कता प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा पनि बिजुलाई कुनै जानकारी छैन् । गाउँमै बिबाह गरेकी जेठी छोरीले कटौरामा ल्याएर दिएको भात र ओमखोरामा ल्याएर दिएको पानीलाई खाएर बिजुले दिन बिताउने गरेका छन् । खाना नसकेर कटौरामा बचेको भात र ओमखोराको पानीमा झिङ्गाहरु भनभनाई रहेका हुन्छन । माखाले दिसा गरेको कटौराको भातलाई भोक लागेपछि खाने गरेका छन् भने, ओमखोराको पानीलाई पिउने गरेका छन् ।
बिजुका जेठा छोरा खिमबहादुर पुन ज्याला मजदुरी गर्नमै ठिक्क छन् । ज्याला मदुरीमै दिन बिताई रहेका खिम घरमा कहिले पनि बस्दैनन् । दिनभरिको ज्याला मजदुरीबाट आएको पैसाले खिमलाई आफ्नै शरिर ढाक्न र पेट पाल्न मुस्किल परेको छ । श्रीमान र श्रीमती बिचको राम्रो सम्बन्ध नभएपछि खिमकी बुढीले दुई छोरी र एक छोरालाई साथमा लिएर अन्तै व्यवस्था गरिसकेकी छन् । छोरा छोरीको पढाई लेखाईसंगै उनीहरुको जीवन र भविश्यको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएर अलग भएकी खिमकी बुढी बृद्ध ससुराको रेखदेख गर्ने मनसायमा छैनन् ।
बिजुका कान्छा छोराको सानै उमेरमा मृत्यु भईसकेको छ भने, धेरै टाढा बिबाह गरेकी कान्छी छोरीले पनि बुवाको सेवामा समय दिन सक्ने अबस्था छैन् । गाउँमै बिबाह गरेकी जेठी छोरीले पनि दैनिक कटौरामा भात र ओमखोरामा पानी पुर्याउनु बाहेक अरु गर्न सक्ने अबस्था छैन् । सय बर्षिय बृद्ध बिजु पुनको स्वास्थ्य उपचार, भरनपोषण, सामाजिक सुरक्षा लगाएतको समग्र व्यवस्थापनमा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी, युवालाई रोजगार र बृद्धहरुको सम्मानसंगै सामाजिक सुरक्षा गर्ने नीति लिएको भेरी नगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखाको महिला, बालबालिका विकास शाखाको ध्यान जान आबश्यक देखिन्छ । साथै बिजु पुनको स्वास्थ्य उपचार, भरनपोषणसंगै सामाजिक सुरक्षामा मानव सेवाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिहरुको पनि ध्यान जान आबश्यक छ ।